Jose Mourinho Oo Ka Hadlay Kulanka Adag Ay Caawa La Dheelayaan Chelsea Iyo Arimo Kale.
HomeHoryaalka IngiriiskaJose mourinho oo ka hadlay kulanka adag ay caawa la dheelayaan chelsea iyo arimo kale.
February 4, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha kooxda Tottenham ayaa tartan adag kala kulmay macalinka cusub ee Blues Thomas Tuchel ka hor kulanka ay iswajahayaan caawa kulan ka tirsan horyaalka ingiriiska.
Jose Mourinho ayaa aaminsan in maareynta Chelsea aysan noqon karin wax adag maxaa yeelay isaga iyo tababarayaal kale oo badan ayaa ku guuleystay koobab Stamford Bridge xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay.
Mourinho ayaa ka hor imaan doono kooxdii usoo maamulay iyo macalinkeeda cusub ee Thomas Tuchel marka caawa shan saac Spurs ay ku martigeliso Blues waqooyiga London.
Tababaraha reer Portugal jose mourinho ayaa magaciisa ku dhigay Stamford Bridge ka dib markii uu kaga soo biiray fc Porto sanadii 2004, isagoo ku guuleystay seddex jeer horyaalka Premier League labo jeer oo kala duwan.
Laakiin Mourinho ma ahan tababaraha kaliya ee u soo qaaday horyaal kooxda Chelsea dhawaan sida uu tilmaamay ka hor kulanka ay haatan la ciyaarayaan kooxdiisii hore.
“Uma maleynayo inay aad u adag tahay inaan macalin ka noqdo Chelsea maxaa yeelay waxaan ahaa mid ku guuleystay horyaal seddex jeer sidoo kale Carlo Ancelotti wuxuu qaaday horyaal Antonio Conte wuxuu qaaday horyaal. Yaa kale? Ma noqon karto wax aad iyo aad u adag maxaa yeelay waxaan ku guuleysanay koobab, ”ayuu yiri Mourinho.
Waxaan aaminsanahay in Chelsea had iyo jeer ay leedahay ciyaartoy waa weyn isla markaana ay tahay koox weyn isla markaana soo mareen tababarayaal fiican ayna ku faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan naadiga iyo ciyaartoy ku siinaya fursad aad u wanaagsan oo aad ku guuleysato koobab.”
Chelsea ayaa ka fogaatay hanashada horyaalka bilihii la soo dhaafay iyadoo Frank Lampard laga ceyriyay isbuucii hore ka dib qaab ciyaareed xun oo ku dhacday in Blues laga badiyay shan ka mid ah sideed kulan oo horyaalka ah.
Tuchel, oo dhawaan u shaqeynayay PSG ilaa laga ceyriyay bishii Diseembar, ayaa la keenay wuxuuna u horseeday Blues guul iyo barbaro labadii kulan ee ugu horeysay ee uu macalin u ahaa.
Mourinho ayaa rumeysan in ku guuleysiga Premier League ay talaabo weyn u noqon doonto Tuchel, kaasoo PSG ku hogaamiyay horyaalnimada Ligue 1 labada xilli ciyaareed ee uu hogaaminayay.
“Caqabadda ugu weyn ee tababare waa in laga shaqeeyo horyaalada ugu fiicanbHoryaalkeena waqtigan waa midka ugu adag, ”ayuu yiri Mourinho.